Fandrobana niharo fandratrana :: Vadina mpitandro filaminana voarohirohy ho nanafika sefo fokontany teo aloha • AoRaha
Fandrobana niharo fandratrana Vadina mpitandro filaminana voarohirohy ho nanafika sefo fokontany teo aloha
Voarohirohy tamina fanafihana trano iray teny Anosimpatrana sady narahina fandratrana olona, tamin’ny alin’ny alakamisy lasa teo, ny vehivavy iray, fito amby efapolo taona, voalaza fa vadina mpitandro filaminana. Tazonina ao amin’ny biraon’ny polisy, etsy Ilanivato Anosimpatrana io vehivavy io, mialoha ny hitondrana azy eny amin’ny Fitsarana.
Lehilahy lehiben’ny fokontany teo aloha ity niharan’ny herisetra ity. Mifankahafantatra izy sy ilay vehivavy vadina mpitandro filaminana voarohirohy ho nanafika azy. Antso vonjy nataon’itsy lehiben’ny fokontany teo aloha no nanaitra ny mpiara-monina, tamin’io alin’ny alakamisy io.
«Notafihin’ny vehivavy niaraka tamina tovolahy iray ilay lehilahy. Mety efa fantatr’izy ireo ny fisian’ny volabe ao an-trano. Nikasa handroba izany izy ireo. Noratraina ny lehilahy tompon-trano. Novelesina hazo ny lohany. Nofatorana lamba ny vavany. Afaka niantso vonjy ihany anefa izy», araka ny fitantaran’ny mpiara-monina amin’ilay voatafika.
Tonga nijery ny zava-misy ny fokonolona. Nantsoina ihany koa ny mpitandro filaminana. Tratra niafina tao amin’ny efitra fidiovana ilay vehivavy ka nentin’ny polisy hatao famotorana. Voatery nalefa teny amin’ny hopitaly kosa ilay voatafika noho ny ratra mafy nahazo azy.
Fantatra fa saika haka ny vola iray tapitrisa ariary tao an-tranon’ity lehiben’ny fokontany teo aloha ity ireo mpanafika. Tsy azo ny vola noho ny fahatongavan’ny fokonolona. Manamafy ny polisy etsy Ilanivato misahana ny famotorana fa: « efa nametraka taratasy fitoriana an’io vehivavy io ilay niharam-boina».
Fanafihana mitam-basy Lehilahy mpandalo naratra voan’ny bala tetsy Ambodifilao
Lozam-piarakodia Maty nohitsahin’ny kamiao iasany ny mpanampy ny mpamily
Fikarohana nataon’ny polisy Tra-tehaka ity mpisoloky sady nandrahona olona ho faty
Raharaha fanenjehana jiolahy :: Nisy nanodinkodina ny taratasy tsiambaratelon’ny Zandarimaria